कोरोना भाइरसका यी लक्षण बालबालिकामा देखिन सक्छ, कसरी घरमै हेरचाह गर्ने ? – Krazy NepaL
कोरोना भाइरसका यी लक्षण बालबालिकामा देखिन सक्छ, कसरी घरमै हेरचाह गर्ने ?
May 18, 2021 463
नेपाल र भारत लगायतका देश कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ । यस कारण, युवा, वृद्धहरू मात्र होइन बालबालिकाहरू पनि संक्रमित भइरहेका छन् । यो भाइरसले सबै उमेरका बालबालिकाहरूलाई असर पुर्याइरहेको छ ।
डाक्टरका अनुसार ज्वरो आएको प्रत्येक ४ देखि ६ घण्टामा प्यारासिटामोल १०–१५ एमजी लिन सकिन्छ । यदि घाँटी दुखाइ वा कफ भएको छ भने बालबालिका र युवाहरुलाई तातो पानीमा थोरै नुन राखेर गार्गल गर्न सक्छन्। बच्चाहरूलाई ओरल रिहाइड्रेसनको समस्या समाधान र पौष्टिक आहार दिइनु पर्दछ। स्रोत arthadabali
Prevभोली जेठ ४ गते मंगलबारको राशीफल हेर्नुहोस्
Nextआज ०४ जेठ २०७८ मंगलवार गणेश भगवानको दर्शन गरी हेर्नुहोस् राशिफल
अ’नु’हा’र’को को’ठी म’न परेन ? घरेलु उपायबाटै यसरी सकिन्छ हटाउन